Fiji Airways inotora kuendesa kwekutanga kweayo maviri maAirbus A350 XWBs
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Fiji Airways inotora kuendesa kwekutanga kweayo maviri maAirbus A350 XWBs
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Fiji Breaking Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Fiji Airways yave ndege yekutanga kubva kuSouth Pacific nharaunda kutora kuendeswa kweA350 XWB, ndege dzenyika dzazvino dzese dzakakura-dzese. Iyo A350-900 yakapihwa zvichitevera mhemberero muTououse, ndiyo yekutanga kune maviri A350 XWBs anozobatana nezvikepe zveFiji Airways. Ndege mbiri dziri kubhadharwa kubva kuDubai-based DAE Capital. Ndege ndidzo dzinotanga kutengwa zvakananga neDAE Capital kubva kuAirbus.
Kununura matsva matsva emafuta anoshanda, Fiji Airways ichashanda iyo A350 XWB munzira dzayo dzeNadi-Los Angeles neNadi-Sydney. Izvi zvichawedzera kukwidziridzwa kwenzvimbo yendege semutungamiriri anotungamira kubva mudunhu reSouth Pacific, pamwe nekupa mukukura kuri kuenderera mberi kwenzvimbo yekushanya yeFiji nehupfumi hwakazara.
Yakagadzirirwa mumatanho maviri emakirasi ane zvigaro makumi matatu nematatu makumi matatu nematatu anosanganisira makumi matatu nematatu bhizinesi rakazara uye zvigaro zvehupfumi zve334, 33 ayo akasarudzwa seBULA SPACE zvigaro neimwe gumbo rekuwedzera, vafambi vanonakidzwa nhanho nyowani dzenzvimbo uye nyaradzo pamwe neThales mukukwira kumusoro tsananguro masisitimu evaraidzo.
Fiji Airways parizvino inoshandisa zvikepe zvitanhatu zveA330 Mhuri uye ichabatsirwa kubva kune yakajairwa mhando chiyero neA350 XWB iyo inobvumidza vatyairi nevashandi kuti vashande pane ese ari maviri marudzi ndege.